China Ọka Bulb 4000k China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ọka Bulb 4000k - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ọka Bulb 4000k)
100W edu ọka ọkụ bọlbụ 5000K
100W edu ọka ọkụ bọlbụ 5000K Bbier 100W kpochapụrụ bọlbụ ọka, ikpo ọkụ dị elu maka ọkụ na ọkwọ ụgbọala. Nke a Led Corn Bulb na- echekwa ihe karịrị pasent 80 nke ọkụ eletrik site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ọkụ nke Led Corn Bulb Canada nwere ihe karịrị awa 50,000, ìhè akara ogo 360, ntụgharị ndepụta dị elu. Na...
Bulbs ngbanwe ọkụ ọkụ mmiri 50W 6000LM
Dochie Anya Nnọgharị Ighalo Anyị nke 50W nwere ike imepụta ihe dị ka 6000lm na-egbuke egbuke. Pesdị Ngwurugwu Light Light a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Ọkụ Mgbanyụ Ọkụ . Ìhè a na-enwu n’okpuru osisi nwere eriri ọla nwere ike...
150w Led Warehouse Pendant Light Bulbs Wholesale
Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ 150W Led bụ 130lm / w na 19500 lumens. Anyị 150w Mere nkwakọba Bulbs nwere ike dochie 400W HPS MH HID. Ebube echichi maka nke a 1 50w Led Warehouse Pendant Lights bụ 5-7m. E nwere ike iji nlezianya ụlọ nkwakọba ihe anyị na- eduzi maka ime ụlọ na n'èzí. Nke a mere ụlọ nkwakọba ihe dallas ejiri maka...
150w Led Corn Cob Bulb Bulb 19500lm
Okpokoro Osisi 150w bụ 19500Lm 4100k 5000K na oghere E27 E39, nhata 500B na bọlbụ MH HPS. Ntughari ala ala ala na ikpo ọkụ na-enyere aka nkwụsịtụ ọkụ, na-eme ka Led Corn Bulb 150w dị elu ruo awa 50000. E ji ya rụọ ọrụ nke alammadụ na-adịgide adịgide ma dị nchebe nke nwere ike inye aka dị mma 400 Led Corn Cob ngwa...
120 Watt Led Corn Bulb Lamp 15600lm
Led Corn Lamp 120w bụ 15600Lm 4100k 5000K na oghere E27 E39, nhata 400B Mb HB na MH HPS. Ntughari nke ala ala ala na ikpo ọkụ na-enyere aka nkwụsịtụ ọkụ, na-eme ka okpukpu 120 Watt Ọkụ ahụ dị elu ruo awa 50000. Emere nke alamini na ugbo elu bu ihe kwesiri iru ala ma nwee nchekwa nke nwere ike inye aka ichota azu 300a...
480v 40w Led Corn Bulb E39 E40
Onu ogugu nke kpochapu ogugu nke ogugu nke ogugu abia na I9 bụ 5200Lm 5000K na oghere E27 E39, nhata 120B na bọtịnụ na MH HPS. Ntughari ala ala ala na ikpo ọkụ na-enyere aka ịkwụsị ikpo ọkụ, na-agbatị oge 40W Led Corn Cob 480v ruo 50000 awa. Emere nke alamini ugbo elu bu ndi kwesiri iru ala ma nwee nchedo nke puru...
30W E27 Ọka Kpị na-acha ọkụ ọkụ 4000K
Okpokoro Osisi 30W nke Ọkụ bụ 3900Lm 5000K na oghere E27 E40, nhata 100B Mb HB na MH HPS. Ntughari ala ala ala na ikpo ọkụ na-enyere aka na-ekpochapu ọkụ, na-eme ka okpukpu 30W ọka Cob na- agbatị ruo oge 50000. Emere nke aluminum aviation ndị ọzọ inogide na nchekwa nke nwere ike inye aka jụụ nke a na ọka klas ngwa...
E26 E27 Corn Cob Light Bulb 15W
The 15W Led Ọkụ Mbara Amazon dochie bọtịnụ nke 50W na nke a Dlc Led Corn Light nwere ike ịchekwa ruo 90% na ọkụ eletrik nke ọkụ. Ruo 1800 N'ihe dị ka afọ 1800, ìhè igwe ojii na-acha ọcha, ndị ọka Cob Light Bulb na- apụta ìhè na mpaghara buru ibu ma na-enwu gbaa. Anyị ọka cob ada ala na-abịa n'otu ntabi anya...
9W E27 Led Corn Cob Retrofit Bulbs
The 9w Led Corn Bulb Amazon bụ 110LM / W, Day White 5000K na nke a 6w Led Corn Bulb Home Depot bụ zuru okè nhazi maka 18W incandescent bọlbụ. Ewunye Ewf E27 Led Corn Cob Retrofit Bulbs enwere ike iji ya na ụlọ, ahịa, ụlọ ọrụ, họtel. Ahịa a na-ahụ maka ọdịmma ala na- eduzi nyochaa bụ Mercury-free, ọ dịghị flickr na ọ...
6W E27 Led Corn Cob Light Bulbs 3000K
Ngwa Led Corn Cob nke 6w bụ 110LM / W 3000K na nke a 6w E27 Led Corn Lamp bụ ngwụcha zuru okè maka mbubata bọtịnụ 18W. Ndị E27 Led Corn Cob Light Bulbs enwere ike iji ya na ụlọ, ahịa, ụlọ ọrụ, họtel. Ọkụ a na-ahụ maka ọdịmma nke ebe obibi a na-acha Australia bụ Mercury-free, ọ dịghị flickr na ọ bụghị UV. The Long...
30W Led Corn Bulb E27
The Led Corn Bulb 30w na -egbuke egbuke na 120lm / w elu watt to lumen mmepụta ogo. Nke a Led Corn Bulb 50w na- anọchi 150W na-agbanye bọtịnụ mgbe ị na-echekwa ọtụtụ ụgwọ eletrik otu afọ. Na Ọka Ọkụ E27 adịghị enwe okpomọkụ, ọ dịghị ọkụ ọkụ, Na-aga n'ihu ma na-agbanyeghachi, ọkụ ọkụ na-acha ndụ ndụ ma na-eme ka...
Anyị Led Corn Bulb 20w bụ ihe na-egbuke egbuke na 130lm / w elu watt to lumen output ratio. Nke a 20W Led Corn Bulb Canada dochie bọmbụ 70W ka ọ na-echekwa ọtụtụ ụgwọ eletrik otu afọ. Egwurugwu Led Ebube E40 enweghi nchapu ọkụ, ọ dịghị ọkụ ọkụ, Nkwụsị na nlọghachi, ọkụ ọkụ na-acha ndụ ndụ ma na-eme ka ihu igwe na...
Ọka Bulb 4000k Ọka Bulb 4000K Ọka Bulb Ọka Bulb Ìhè 5000K Ọka Led Bulb Dlc Led Corn Bulb 4000k 120W ọka Bulb Ọka Cob